Ciidamada Sirdoonka dalka Turkiga kuwoodii magaalada Muqdisho yimid oo gacan loo taagay - Wargeyska Faafiye
Ciidamada Sirdoonka dalka Turkiga kuwoodii magaalada Muqdisho yimid oo gacan loo taagay
Ciidamo Sirdoon ah oo aad u tababaran ayaa magaalada Muqdisho kaga soo horeeyay madaxweynaha dalka Turkiga iyo wafuudii uu hogaaminayay oo shalay galab ka ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Somalia .
Sirdoonka Turkiga oo dhoor jiho isku kala qeybiyay waxay u badnaayeen kuwa ka hortaga qaraxyada is miidaaminta ah iyo Miinooyinka jidka loogu aaso madaxda Caalamka. Askartaan oo qalab casri ah watay waxay isku kala qeeybiyeen hubinta amaanka wadooyinka u dhaxeeya garoonka Diyaaradaha Aadan Cade ilaa Isbitaal Digfeer .
Ciidamadaan sida qaaska ah u tababaran ayaa sidoo kale waxay gacan weyn ka helayeen ciidamada Sirdoonka dowlada iyo kuwa AMISOM oo garab ahaa . Wadamo badan oo Caalamka ku yaal waliba nabad ah ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca falal qaraxyo qorsheysan ah . Madaxweyne Rajab Tayib Erdogan intii uu magaalada Muqdisho joogay wax rasaas ah lama maqlin, qaraxna warkiisa daayee . Awooda nuucaan ah ayaa waxeey soo jiidatay indhaha Caalamka maadaama madaxda Aduunka ay imaan karaan saacad walba magaalada Muqdisho oo gashay heerkii ugu sareeyay ee dhanka amaanka iyo nolasha . Author: Liban Farah
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsWariye Deparani oo xarigga laga sii daayay.Xudur: Dagaal lix qof ku dhinteen.Madaxweyne Xasan oo booqday dhaawacyadii qaraxii Buulo-burte.Qarax Muqdishu Kadhacay oo dad badani kudhinteenUgaas caan ahaa oo lagu dilay Kismaayo.